Battle for Wesnoth 1.14, fametrahana amin'ny Ubuntu 18.04 avy amin'ny PPA tsy ofisialy | Ubunlog
Ho hitantsika ao amin'ny lahatsoratra manaraka ny fomba mametraka Battle for Wesnoth lalao kinova 1.14.3 amin'ny Ubuntu 18.04 sy / na Ubuntu 16.04. Battle for Wesnoth dia lalao paikady loharanom-baovao misokatra mifandimby miaraka amina lohahevitra nofinofy lehibe. Izy io dia misy ny ady amin'ny mpilalao tokana sy ny ady amin'ny marobe an-tserasera.
Fantatra taloha amin'ity bilaogy ity ity lalao ity, ny mpiara-miasa sasany efa nilaza tamintsika azy io tao lahatsoratra teo aloha. Raha toa ny famoahana Ubuntu rehetra dia manolotra Wesnoth 1.12 ao amin'ny toerana tena anafenana. Ny kinova farany dia nahatratra 1.14.3, fa amin'izao fotoana izao dia tsy misy ao amin'ny trano fisakafoanana Ubuntu ofisialy. Na eo aza izany dia ho afaka hankafizantsika azy avy PPA tsy ofisialy.
Araka ny tranokalan'ny lalao, ahafahantsika miroso amin'ny iraka very hevitra hamerina ny seza fiandrianantsika ara-dalàna. Tsy maintsy mandositra ny Lich Lords isika mankany amin'ny trano vaovao any ampitan'ny ranomasina. Mila miditra lalina any amin'ny lalina indrindra amin'ny tany isika mba hamoronana firavaka afo.
Tsy maintsy manangana tafika lehibe, mamadika tsikelikely ireo mpiasa tsotra ho veterana henjana. Hahafahantsika misafidy singa iray amin'ny manam-pahaizana manokana isan-karazany, ary misafidy hery miaraka amin'ny toetra mampiavaka azy hiady amin'ny tany samihafa amin'ny fanoherana ny karazana fanoherana rehetra.
Mandritra ny lalao dia ho hitantsika ny fisafidianana karazana karazana roanjato mahery (miaramila an-tongotra, mpitaingin-tsoavaly, mpandefa zana-tsipìka ary mpanao majia, sns) sy ny hetsika fiadiana miainga amin'ny fanotrehana izay misy singa vitsivitsy mankany amin'ny fifandonana amin'ny tafika lehibe. Azonao atao koa fanamby ny namanao na ny olon-tsy fantatrao ary miady amin'ny ady nofinofy amin'ny multiplayer.
1 Ireo endri-javatra ankapobeny an'ny Battle for Wesnoth 1.14
2 Ampidiro ny Battle for Wesnoth 1.14 amin'ny alàlan'ny PPA
Ireo endri-javatra ankapobeny an'ny Battle for Wesnoth 1.14
Ireo singa dia velomina amin'ny endrika miloko fomba kanto pixel, miaraka amin'ny saripika semi-realistes ampiasaina amin'ny fifampiresahana.
Afaka mankafy isika Fampielezan-kevitry ny mpilalao tokana 17 y Sarintany multiplayer 55 hisafidianana.
Anisan'ireo safidy rehetra, afaka manisa bebe kokoa noho isika isika Karazana karazana 200. Anisan'izany isika afaka mahita fizarana lehibe fito, samy manana ny fahaizany, fitaovam-piadiana ary ody miavaka.
Raiso amin'ny mpilalao hafa ny Internet na fanamby ny namanao amin'ny alàlan'ny a tambajotra tsy miankina / eo an-toerana.
Ny lalao dia nadika tamin'ny fiteny 30 mahery samy hafa.
Mihaona indray isika atiny noforonin'ny mpilalao maro. Ho hitantsika io avy amin'ny mpizara add-ons ofisialy. Manomboka amin'ny fampielezana vaovao, fizarana ary sarintany marobe miaraka amin'ny mekanika ka hatramin'ny asa kanto vaovao sy tokana.
Ny lalao dia mifanaraka amin'ny Microsoft Windows, Apple macOS ary GNU / Linux.
Ampidiro ny Battle for Wesnoth 1.14 amin'ny alàlan'ny PPA
Hay PPA tsy ofisialy izay ahafahantsika mahazo ny kinova farany amin'ity lalao ity hatreto, ho an'ny Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04. Raha te hihazona azy dia tsy maintsy sokafantsika ny terminal (Ctrl + Alt + T) ary soraty ity baiko manaraka ity hanampiana ny PPA:
Aorian'ny fampidirana ny PPA, raha mihazakazaka ny baiko amin'ny Ubuntu 18.04 ianao dia afaka mamonjy ny tenanao voalohany, mandehana tsirairay ny baiko. havaozy ny lisitry ny rindrambaiko misy ary apetaho ny lalao:
Raha vantany vao vita ny fametrahana dia afaka mitady ny lalao amin'ny solosaintsika isika izao.
Para esory ny PPA, Sokafy ny fitaovana Rindrambaiko & Fanavaozana ary mankanesa any amin'ny tabilao Software hafa. Azonao atao koa ny manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary manoratra ao:
Para hamafa ny lalao, sokafy ny terminal ary mihazakazaha:
Battle for Wesnoth dia rindrambaiko loharano misokatra. Manana a vondron'olona mpilatsaka an-tsitrapo miroborobo miara-miasa amin'ny fanatsarana ny lalao. Azonao atao ny mamorona ny singa misy anao, mamolavola ny sarinao manokana, ary manangana fanentanana tanteraka mihitsy aza. Ny atiny notehirizin'ny mpampiasa dia hita ao amin'ny mpizara plugin. Ny fivoarana tsara indrindra dia tafiditra amin'ny fampidirana azy amin'ny fizarana ofisialy Wesnoth.
Ireo mpampiasa mila izany, dia ho afaka hampiasa ilay mpampiasa mpampiasa izay hita ao amin'ny tranonkalan'ny lalao. Ity boky torolalana ity dia nadika tamin'ny fiteny maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Battle for Wesnoth 1.14, fametrahana amin'ny Ubuntu 18.04 avy amin'ny PPA
KERRY: 3 dia hoy izy:
Tena tiako be ity torolàlana ity, mora be ny mahatakatra sy miasa tanteraka.
Misaotra anao indray amin'ity toro-lalana ity satria mpankafy an'ity lalao ity aho ary tsy nahazo ny kinova farany. Namonjy ahy ianao !! tiako izy ireo
Valiny amin'i KERRY: 3
LeoCAD, mamorona modely virtoaly miaraka amin'ireo sombin'ny LEGO avy amin'ny Ubuntu
Kanelina 4, kinova vaovao izay ho haingana indrindra amin'ny rehetra